Sawirro: Cabdisamad Macalin Maxamuud oo maanta loo xildhibaan federaal ah - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Cabdisamad Macalin Maxamuud oo maanta loo xildhibaan federaal ah
Sawirro: Cabdisamad Macalin Maxamuud oo maanta loo xildhibaan federaal ah
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaa maanta ka socota doorashada kuraas ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya, gaar ahaan xubnaha deegaan doorashadooda ay tahay magaaladaasi.
Doorashada oo kursigii ugu horreeyey ee HOP#139 la qabtay ayaa waxaa kusoo baxay Cabdisamad Macalin Maxamuud oo loo doortay ka mid noqoshada Baarlamaanka 11-aad ee dalka.
Cabdisamad ayaa si gaar ah loogu xiray kursigan, waxaana u tanaasushay Xamdi Cali Shire oo aheyd malxiisad, kadibna waxaa loo qaaday codeyn gacan tag ah, isaga oo helay 101 cod oo ah dhammaan ergadii goobta ku sugneyd.
Xildhibaan Cabdisamad ayaa waxaa dhalay hoggaamiyaha Ahlu Sunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Xasan, waxaana kursigan uu u muuqdaa mid lagu qancinayo Ahlu Sunna oo horey dagaal ula gashay dowlad goboleedka Galmudug.
Kursigaan ayaa waxaa ku fadhiyay baarlamaanka 10-aad Cabdixakiin Macalin Axmed oo dhowaan loo doortay Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Guddiga hirgelinta doorashada ee maamulka Galmudug ayaa ka warbixiyey sida ay u dhacday doorashadan oo la qabtay saaka aroortii hore.
Maanta oo taariikhdu tahay 3-da Febaraayo 2022 guddiga Doorashada Galmudug wuxuu qabtay Doorashada Kursiga nambarkiisu yahay HOP#139 oo musharax isku diiwaangeliyeen, kalana ah:
1- Cabdisamed Macalin Maxamuud Xasan
2- Xamdi Cali Shire
Waxaa ka tanaasulay tartanka Xamdi Cali Shire waxaa ergadu hab gacan taag ah ugu codeeyeen musharax Cabdisemad Macalin Maxamuud Xasan waxaana ogol ugu codeeyey 101 oo dhammaan ergada ah.
Sidaa daraadeed waxaa ku guuleystay doorashada kursi HOP#139 Musharax Cabdisemad Macalin Maxamuud Xasan oo helay 101 cod.